Masiixiyiinta iyo Muslimiintaba, Ciise waa ina Maryam.
2.1 Maryama Ciise Hooyadiis
2.2 Shakhsiyada Maryama
2.3 Qoyska Cimraan
2.4 Nabiyada iyo Rasuusha
2.5 Jadwalka Nabiyada iyo Rusuusha Kutubta lagu soo dejiyay
2.6 Qoraalo La Mid Ah
Injiil Kitaabka Injiil (Af-giriig: Αγία Γραφή, Βίβλος; ; ; "kitaabu ciisah") waa kitaab Ilaahay ku soo dejiyay Nebi Ciise (c.s). Erayga Injiil macnihiisu waa war wanaagsan ama bishaaro. Inkasta oo mararka qaarkood Axdiga Cusub lagu magcaabo Injiil, haddana waxaa si gaar ah eraygan loogu yeeraa mid walba oo ka mid ah afarta qoraal ee ugu horreeya Axdiga Cusub oo kala ah Mateeyos, Maarkos, Luuqa, iyo Yooxannaa..
Ciise Ilaahay ma Ahan. Qorniinka Quduuska ah waxay ina baraan inaannu “leennahay Ilaah keliya” oo uu Ciise Masiixna ahaa rasuulkiisa isla hooseeya. (1 Korintos 8:6) Ciise si cad buu u yiri Ilaah baa iga sarreeya oo isagaa dunida ii soo diray. Ciise waa nebigii Ilaah, ma ahan Ilaaha Qaadirka ah. . Ciise si cad buu u yiri Ilaah baa iga sarreeya oo isagaa dunida ii soo diray.
↑ Wax ka Barta Masiix oo ah Hoggaamiyaha
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciise&oldid=227406"
Last edited on 29 Diseembar 2021, at 15:57
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 29 Diseembar 2021, marka ee eheed 15:57.